ပင်လယ် ဓားပြ အလံလွှင့်ထူပြီး ရွက်လွှင့်နေသည့် အမေရီကန် ရေတပ်၏ ဖျက်သင်္ဘော အကြောင်း - MMOnlineNews
ပင်လယ်ဓားပြအလံ နဲ့ အမေရိကန် ဖျက်သင်္ဘော အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ သူ့ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအားလုံးမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလံမဟုတ်သော/ ပုံမှန်မဟုတ်သော အလံ အသုံးပြုခြင်းကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံတင် ဖျက်သင်္ဘော တစ်စီးကတော့ ထူးထူးခြားခြားပဲ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အလံတစ်မျိုး လွှင့်တင်မှူ့ကို တွေ့မြင်ရပါမယ်။ ထို င်္သ​ဘောကတော့ USS Kidd ( DDG 100) USS kidd ဆိုတဲ့
င်္သ​ဘောဟာ ၁၇ရာစုအတွင်းက လွှင့်တင်ခဲ့ကြဖူးတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြအလံဖြစ်တဲ့ Jolly Roger ( skull and crossbones) အလံကို လွှင့်ထူးထားခြင်းအဖြစ်
ဆီယက်တဲလ်မြို့… ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို ပြန်လာစဉ်မှာ တွေ့ရမှာပါ။ USS Kidd ဟာ အမေရိကန်အလံ နှင့်အတူ လွှင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ Jolly roger ( ပင်လယ်ဓားပြအလံ) ၁၇ရာစုလောက်မှာ ပင်လယ်ဓားပြတွေဟာ
တိုက်ခိုက်မယ့် ပစ်မှတ်သဘော် သို့ ရန်သူ့သဘော်ကို သေချာပါက လူ​ခေါင်း နဲ့ အရိုး အလံကို လွှင့်ထူပြီး တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလို လွှင့်ထူခြင်းကို စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်တွေမှာ မသုံးကြပါဘူး။
ထူးခြားစွာပဲ ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလတုန်းက အဂ်လိပ်ရေငုတ်သဘော်ဟာ ပင်လယ်ဓားပြအလံ လွှင့်ထူပြီး ဂျာမန်ခရူဇာစစ်သဘော်ကို တိုက်ခိုက်နစ်မြုပ် အောင်ပွဲခံခြင်း ဖြင့် Jolly roger အလံကို စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ မှာ စတင်အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။
ထို့အတူပဲ.ဒီ​နေ့ခေတ်ရဲ့ USS kidd ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ တရားဥဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း တင်သွင်းလာတဲ့ မူးယစ်ဆေးများသယ်ဆောင်ရေယာဉ်များကို ဖမ်းဆီးသော
စစ်ဆင်ရေးဖြစ်တဲ့ Wolf Pact ကို အကောင်အထည်ဖော်နေသော Helicopter Maritime Strike Squadron 75 (HSM 75) ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၂၀၂၀ ဧပြီလအတွင်းကတည်းက တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
USS kidd အနေနဲ့ သူတို့အုပ်စုလိုက် စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတွင်းမှာ ကာလတန်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ကျော် တန်ကြေးရှိ ကိုကင်း ( မူးယစ်ဆေး) ကီလို ၆၅၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်။
စစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှာလည်း စစ်သဘော်တွေ အနေနဲ့ သူ၏ သဘော်သား ၁၈ယောက်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစပ်လာမှူ့ကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ အခြေစိုက်စခန်းသို့ ပြန်လာရင် အမိန့်ရခဲ့ပါတယ်။USS Kidd မှာ ဘာကြောင့် ဓားပြအလံတင်ခွင့်ရသလဲ?
ပထမဆုံးပြောပြချင်တာက USS Arizona ( ယူအက်အက် အရီဇိုးနား စစ်သဘော် မှ ဒု ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Issac Kidd .. ဆိုတဲ့ အရာရှိကြီး ကနေစရမယ်ထင်ပါတယ်။
Issc Kidd ရဲ့ မိဘတွေက နာမည်ကျော် ပင်လယ်ဓားပြ William Kidd ကို အားကျပြီး Kidd အဖြစ် မှည့်ယူထားတာပါ။ ( William Kidd ဟာ 1701 ခုနှစ်မှာ ပင်လယ်ရေကြောင်း ဓားပြဥပဒေအရ ကွက်မျက်ခံရသည်)
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Issac Kidd ဟာ ပုလဲဆိပ်ကမ်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်စဉ်မှာ စစ်သဘော် ရဲ့ ကုန်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးတံတားပေါ်မှာပဲ ဂျပန်လေယာဉ် ရဲ့ တိုက်ရိုက်ဗုံးကြဲချခြင်း ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Issac Kidd သေဆုံးခဲ့မှူ့တွင်း အမေရိကန်စစ်တပ်ကနေ Medal of Honor ဆု ​ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူသေဆုံးပြီး ၂ နှစ်အကြာ ၁၉၄၃ခုနစ်တွင်
USS Kidd (DD-661) Fletcher class destroyer ကို တပ်တော်ဝင်ခဲ့ပြီး Issac kidd ကို ဂုဏ်ပြုပြီး သူ့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ USS Kidd ရဲ့ သဘော်သားတွေဟာ William Kidd ရဲ့ ဇတ်ကြောင်းကို
ကြားဖူးနေတဲ့အခါ သေဆုံးသွားသူ Issac kidd ရဲ့ မိန်းမဆီမှာ သူ့ယောကျာ်းကို ဂုဏ်ပြု နာမည်ပေးတဲ့ သဘော်မှာ ပင်လယ်ဓားပြ ပုံ နဲ့ တံဆိပ်ကို မီးခိုး ခေါင်းတိုင်မှာ ဆေးချယ်ဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
သူ့မိန်းမက ခွင့်ပြုပေးတဲ့အခါမှာ သဘော်သားတွေ ဆေးချယ်လာကြပါတယ်။ USS Kidd ( DD-661) ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပစိဖိတ်ဒေသရေတပ်စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်တင်သဘော်တွေရဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပျက်ကျခဲ့သော ရေတပ်လေယာဉ်အမှူ့ထမ်းတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးအများအပြား ပြုလုပ်ခဲ့ကာ…
သူကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်အမှူ့ထမ်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ ဌာနတွေကနေ ရေခဲမုန့် နဲ့ ပြန်ရွေးစေပါတယ်။ထိုသို့ ပြန်ရွေးစေတဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့ကြောင့် USS Kidd ( DD-661) ကို ပစိဖိတ်ရဲ့ ဓားပြ လို့ နာမည်ပြောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့အတူပဲ လူကယ်ဆယ်ပြီးတိုင်း ( စစ်ဆင်ရေး တစ်ခု အနေနဲ့ မှတ်ယူကြသည်) USS kidd ဟာ ပင်လယ်ဓားပြအလံ ကိုပါ လွှင့်ထူလာကြပါတော့တယ်။
USS Kidd ( DD-661) ကို အမေရိကန်ရေတပ်ကနေ အနားပေးလိုက်တဲ့အခါ သမိုင်းကြောင်း ရှိလာတဲ့ Kidd နာမည်ကို ပြန်ယူပြီး USS Kidd ( DDG 993) အဖြစ် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ တပ်တော်ဝင်ပြီး နာမည်ပြောင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။
DDG 993 ကတော့ ပင်လယ်ဓားပြအလံ နဲ့ ပက်သက်လို့ အလံတင်ခွင့် ရှိပေမယ့်လည်း သိပ်သုံးစွဲတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ USS Kidd ( DDG 100)Arleigh Burke-class destroyer အဖြစ် တစ်ခါထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ သဘော်ကတော့ ပင်လယ်ဓားပြ အလံကို မကြာခဏဆိုသုံးစွဲလာတာတွေ့ရမှာ​ပါ။ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mark Esper ကတော့ ရေတပ်သဘော်တွေဟာ အခမ်းအနားအလံ..
အမှတ်တရ အလံ နဲ့ ရေတပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ သတ်မှတ်အလံများကိုသာ လွှင့်ထူခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်၍ လွှင့်ထူပါက စစ်ဆင်ရေး သို့ ချစ်ကြည်ရေး..
အခမ်းအနားတစ်ခုခုကနေ လှည့်ပြန်စေခြင်း ပြစ်ဒဏ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ထို့အတူ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Lisa Lawrence ကလည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏
သတ်မှတ်ချက်မပါဝင်သော အလံများကို လွှင့်ထူခွင့် မပေးထားပါဟု အသိပေးကြေငြာထားပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း USS Kidd နဲ့ Jolly Roger အလံဆိုတာ
ပူးတွဲမှတ်မိနေမယ့် ထုံးတမ်းဓ​လေ့လို ဖြစ်နေတဲ့အလံမို့ ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ( ပင်လယ်ဓားပြအလံ /Jolly Roger အလံကို အခြားသဘော်တွေမှာ လုံးဝ လွှင့်ထူခွင့် မရှိပါဘူး။)
ပငျလယျ ဓားပွ အလံလှငျ့ထူပွီး ရှကျလှငျ့နသေညျ့ အမရေီကနျ ရတေပျ၏ ဖကျြသင်ျဘော အကွောငျး
ပငျလယျဓားပွအလံ နဲ့ အမရေိကနျ ဖကျြသင်ျဘော အမရေိကနျ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနဟာ သူ့ရဲ့ လကျနကျကိုငျတပျတှအေားလုံးမှာ သတျမှတျထားတဲ့ အလံမဟုတျသော/ ပုံမှနျမဟုတျသော အလံ အသုံးပွုခွငျးကို ကနျ့သတျထားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ပဲ့ထိနျးဒုံးပြံတငျ ဖကျြသင်ျဘော တဈစီးကတော့ ထူးထူးခွားခွားပဲ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ သူ့ရဲ့ အလံတဈမြိုး လှငျ့တငျမှူ့ကို တှမွေ့ငျရပါမယျ။ ထို င်ျသ​ဘောကတော့ USS Kidd ( DDG 100) USS kidd ဆိုတဲ့
င်ျသ​ဘောဟာ ၁ရရာစုအတှငျးက လှငျ့တငျခဲ့ကွဖူးတဲ့ ပငျလယျဓားပွအလံဖွဈတဲ့ Jolly Roger ( skull and crossbones) အလံကို လှငျ့ထူးထားခွငျးအဖွဈ
ဆီယကျတဲလျမွို့… ရတေပျအခွစေိုကျစခနျးကို ပွနျလာစဉျမှာ တှရေ့မှာပါ။ USS Kidd ဟာ အမရေိကနျအလံ နှငျ့အတူ လှငျ့ထားခဲ့ပါတယျ။ Jolly roger ( ပငျလယျဓားပွအလံ) ၁ရရာစုလောကျမှာ ပငျလယျဓားပွတှဟော
တိုကျခိုကျမယျ့ ပဈမှတျသဘျော သို့ ရနျသူ့သဘျောကို သခြောပါက လူ​ခေါငျး နဲ့ အရိုး အလံကို လှငျ့ထူပွီး တိုကျခိုကျကွပါတယျ။ ဒီလို လှငျ့ထူခွငျးကို စဈဖကျဆိုငျရာ ယာဉျတှမှော မသုံးကွပါဘူး။
ထူးခွားစှာပဲ ပထမကမ်ဘာစဈကာလတုနျးက အဂျလိပျရငေုတျသဘျောဟာ ပငျလယျဓားပွအလံ လှငျ့ထူပွီး ဂြာမနျခရူဇာစဈသဘျောကို တိုကျခိုကျနဈမွုပျ အောငျပှဲခံခွငျး ဖွငျ့ Jolly roger အလံကို စဈဖကျဆိုငျရာ မှာ စတငျအသုံးပွုလာခဲ့ပါတယျ။
ထို့အတူပဲ.ဒီ​နခေ့တျေရဲ့ USS kidd ဟာ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးနဲ့ တရားဥဒစေိုးမိုးရေး လုပျငနျးစဉျအရ အမရေိကနျနိုငျငံအတှငျး တငျသှငျးလာတဲ့ မူးယဈဆေးမြားသယျဆောငျရယောဉျမြားကို ဖမျးဆီးသော
စဈဆငျရေးဖွဈတဲ့ Wolf Pact ကို အကောငျအထညျဖျောနသေော Helicopter Maritime Strike Squadron 75 (HSM 75) ရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈ ၂၀၂၀ ဧပွီလအတှငျးကတညျးက တာဝနျပေးခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ။
USS kidd အနနေဲ့ သူတို့အုပျစုလိုကျ စဈဆငျရေးတဈခုအတှငျးမှာ ကာလတနျကွေး အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၃၀ ကြျော တနျကွေးရှိ ကိုကငျး ( မူးယဈဆေး) ကီလို ၆၅၀ ကြျောကို ဖမျးဆီးရမိခဲ့တယျ။
စဈဆငျရေးအတှငျးမှာလညျး စဈသဘျောတှေ အနနေဲ့ သူ၏ သဘျောသား ၁၈ယောကျဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ကူးစပျလာမှူ့ကွောငျ့ လှနျခဲ့တဲ့ အခွစေိုကျစခနျးသို့ ပွနျလာရငျ အမိနျ့ရခဲ့ပါတယျ။USS Kidd မှာ ဘာကွောငျ့ ဓားပွအလံတငျခှငျ့ရသလဲ?
ပထမဆုံးပွောပွခငျြတာက USS Arizona ( ယူအကျအကျ အရီဇိုးနား စဈသဘျော မှ ဒု ရတေပျဗိုလျခြုပျကွီး Issac Kidd .. ဆိုတဲ့ အရာရှိကွီး ကနစေရမယျထငျပါတယျ။
Issc Kidd ရဲ့ မိဘတှကေ နာမညျကြျော ပငျလယျဓားပွ William Kidd ကို အားကပြွီး Kidd အဖွဈ မှညျ့ယူထားတာပါ။ ( William Kidd ဟာ 1701 ခုနှဈမှာ ပငျလယျရကွေောငျး ဓားပွဥပဒအေရ ကှကျမကျြခံရသညျ)
ဒုဗိုလျခြုပျကွီး Issac Kidd ဟာ ပုလဲဆိပျကမျးတိုကျခိုကျခံရခွငျးဖွဈစဉျမှာ စဈသဘျော ရဲ့ ကုနျးပတျဆကျသှယျရေးတံတားပျေါမှာပဲ ဂပြနျလယောဉျ ရဲ့ တိုကျရိုကျဗုံးကွဲခခြွငျး ခံရပွီး သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။
Issac Kidd သဆေုံးခဲ့မှူ့တှငျး အမရေိကနျစဈတပျကနေ Medal of Honor ဆု ​ပေးခဲ့ပါတယျ။ သူသဆေုံးပွီး ၂ နှဈအကွာ ၁၉၄၃ခုနဈတှငျ
USS Kidd (DD-661) Fletcher class destroyer ကို တပျတျောဝငျခဲ့ပွီး Issac kidd ကို ဂုဏျပွုပွီး သူ့အမညျပေးခဲ့ပါတယျ။ USS Kidd ရဲ့ သဘျောသားတှဟော William Kidd ရဲ့ ဇတျကွောငျးကို
ကွားဖူးနတေဲ့အခါ သဆေုံးသှားသူ Issac kidd ရဲ့ မိနျးမဆီမှာ သူ့ယောကျြားကို ဂုဏျပွု နာမညျပေးတဲ့ သဘျောမှာ ပငျလယျဓားပွ ပုံ နဲ့ တံဆိပျကို မီးခိုး ခေါငျးတိုငျမှာ ဆေးခယျြဖို့ ခှငျ့တောငျးခဲ့ကွပါတယျ။
သူ့မိနျးမက ခှငျ့ပွုပေးတဲ့အခါမှာ သဘျောသားတှေ ဆေးခယျြလာကွပါတယျ။ USS Kidd ( DD-661) ဟာ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျး ပစိဖိတျဒသေရတေပျစဈဆငျရေးတှမှော ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
လယောဉျတငျသဘျောတှရေဲ့ စဈဆငျရေးတှမှော ပါဝငျခဲ့ပွီး ပကျြကခြဲ့သော ရတေပျလယောဉျအမှူ့ထမျးတှကေို ကယျဆယျရေးအမြားအပွား ပွုလုပျခဲ့ကာ…
သူကယျဆယျခဲ့တဲ့ လယောဉျအမှူ့ထမျးတှကေို သကျဆိုငျရာတပျဖှဲ့ ဌာနတှကေနေ ရခေဲမုနျ့ နဲ့ ပွနျရှေးစပေါတယျ။ထိုသို့ ပွနျရှေးစတေဲ့ ခဈြစရာ ဓလကွေ့ောငျ့ USS Kidd ( DD-661) ကို ပစိဖိတျရဲ့ ဓားပွ လို့ နာမညျပွောငျပေးခဲ့ကွပါတယျ။
ထို့အတူပဲ လူကယျဆယျပွီးတိုငျး ( စဈဆငျရေး တဈခု အနနေဲ့ မှတျယူကွသညျ) USS kidd ဟာ ပငျလယျဓားပွအလံ ကိုပါ လှငျ့ထူလာကွပါတော့တယျ။
USS Kidd ( DD-661) ကို အမရေိကနျရတေပျကနေ အနားပေးလိုကျတဲ့အခါ သမိုငျးကွောငျး ရှိလာတဲ့ Kidd နာမညျကို ပွနျယူပွီး USS Kidd ( DDG 993) အဖွဈ ၁၉၈၁ ခုနှဈမှာ တပျတျောဝငျပွီး နာမညျပွောငျးပေးလာခဲ့ပါတယျ။
DDG 993 ကတော့ ပငျလယျဓားပွအလံ နဲ့ ပကျသကျလို့ အလံတငျခှငျ့ ရှိပမေယျ့လညျး သိပျသုံးစှဲတာမြိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာတော့ USS Kidd ( DDG 100)Arleigh Burke-class destroyer အဖွဈ တဈခါထပျပျေါလာခဲ့ပွနျပါတယျ။
ဒီတဈခါ သဘျောကတော့ ပငျလယျဓားပွ အလံကို မကွာခဏဆိုသုံးစှဲလာတာတှရေ့မှာ​ပါ။ အမရေိကနျကာကှယျရေးဝနျကွီး Mark Esper ကတော့ ရတေပျသဘျောတှဟော အခမျးအနားအလံ..
အမှတျတရ အလံ နဲ့ ရတေပျစညျးမဉျြးစညျးကမျးအရ သတျမှတျအလံမြားကိုသာ လှငျ့ထူခှငျ့ပွုထားတာဖွဈပွီး တကယျလို့ စညျးမဉျြးခြိုးဖောကျ၍ လှငျ့ထူပါက စဈဆငျရေး သို့ ခဈြကွညျရေး..
အခမျးအနားတဈခုခုကနေ လှညျ့ပွနျစခွေငျး ပွဈဒဏျ သတျမှတျထားပါတယျ။ ထို့အတူ ပငျတဂှနျစဈဌာနခြုပျရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ Lisa Lawrence ကလညျး ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန၏
သတျမှတျခကျြမပါဝငျသော အလံမြားကို လှငျ့ထူခှငျ့ မပေးထားပါဟု အသိပေးကွငွောထားပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး USS Kidd နဲ့ Jolly Roger အလံဆိုတာ
ပူးတှဲမှတျမိနမေယျ့ ထုံးတမျးဓ​လလေို့ ဖွဈနတေဲ့အလံမို့ ခှငျ့ပွုပေးထားပါတယျခငျဗြာ။ ( ပငျလယျဓားပွအလံ /Jolly Roger အလံကို အခွားသဘျောတှမှော လုံးဝ လှငျ့ထူခှငျ့ မရှိပါဘူး။)
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ မင်းအောင်လှိုင်အား ICC မှတရားဆွဲဆိုပြီးရုံးတင်နိုင်ရန် အာဂျင်တီးနားတရားရုံးက လက်ခံလိုက်ပြီ